စမတ်ဖုန်း အလွန် စွဲလမ်းနေလား? ဒီ App တွေနဲ့ ဖြတ်လိုက်ပါ။ – DigitalTimes
စမတ်ဖုန်း အလွန် စွဲလမ်းနေလား? ဒီ App တွေနဲ့ ဖြတ်လိုက်ပါ။
စမတ်ဖုန်းများဟာ လူတွေကို ကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေ အထောက်အကူပြုလာကြပါပြီ။ ဒါပေမယ့် စမတ်ဖုန်းများကို အလွန်အကျွံ စွဲလမ်းခြင်းကြောင့် ကျောင်းသားများအတွက် ပညာရေးကို ထိခိုက်စေခြင်း၊ မိသားစုဝင်များအကြားမှာ ဆက်ဆံရေး နည်းပါးလာခြင်း၊ အချိန်များ ကုန်ဆုံးခြင်း အပါအဝင် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး ပြဿနာများစွာကို ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် စမတ်ဖုန်း အလွန်အကျွံ စွဲလမ်းမှုအား ကုစားပေးမယ့် Android Apps များကို ဖန်တီးလာကြပါတယ်။
၁။ Quality Time
Quality Time က သင့်ဖုန်းမှာ Apps များ အသုံးပြုမှုကို စောင့်ကြည့်တိုင်းတာပေးပါတယ်။ App တစ်ခုချင်းစီကို အသုံးပြုတဲ့ အချိန်ကိုလည်း တွက်ချက်ပေးပါတယ်။ နေ့စဉ် ၊ အပတ်စဉ် သင့်ရဲ့ ဖုန်း အသုံးပြုမှုကို အသေးစိတ် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုမှု ကန့်သတ် ပိတ်ပင်ချင်တဲ့ Apps များအတွက် သင်ကိုယ်တိုင် စည်းမျဉ်းများ ပြဌာန်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကန့်သတ် ပိတ်ပင်မယ့် အချိန်များကို Schedule ပြုလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ Weekdays, Weekends များအတွက် ပရိုဖိုင်များ ပြုလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ သူက Incoming Calls, Messages များကိုလည်း ပိတ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ ကန့်သတ်ထားချိန်များမှာ အသုံးပြုခွင့်ပေးထားမယ့် Apps များကို သင်က ရွေးချယ်ထားနိုင်ပါတယ်။ သူ့ကို အကောင့်မလုပ်ဘဲနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပေမယ့် အကောင့် ပြုလုပ်ထားရင် သင့်ရဲ့ ဖုန်း အသုံးပြုမှုကို ၆ လအထိ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ဒေတာများကို Cloud မှာ သိမ်းပေးထားတဲ့အတွက် အခြား Device များကနေလည်း ရယူနိုင်ပါတယ်။
Offtime ဟာ စမတ်ဖုန်း အလွန်အကျွံ စွဲလမ်းမှုအား ကုစားပေးမယ့် Android Apps များထဲမှာ အကောင်းဆုံးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သူက Facebook , WhatsApp အပါအဝင် သင် စွဲလမ်းစွာ အသုံးပြုတဲ့ Apps များကို Block လုပ်ပေးပါတယ်။ သူဟာ Google ရဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ထုတ် အကောင်းဆုံး App ၁၀၀ စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သူက Calls, Notifications, SMS များကိုလည်း ပိတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ဖုန်းအသုံးပြုမှုကို သူက တွက်ချက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် သင့်ကိုယ်သင် ဆင်ခြင်နိုင်အောင် သူက တွန်းအားပေးပါတယ်။
၃။ AppBlock – Stay focused
AppBlock က သင့်ရဲ့ ကျောင်းစာ၊ အလုပ်များအတွက် သင့်ဖုန်းမှ အနှောင့်အယှက်ပေးမယ့် Apps များကို ခဏတာ ပိတ်ပင်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ မိဘများက ကလေးငယ်များ စာလုပ်တဲ့ အချိန်များမှာ သူသုံးလေ့ရှိတဲ့ Apps များကို ခဏတာ ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ မိဘများက PIN Code ဖြင့် AppBlock ဖွင့်ခြင်းအား ကာကွယ်နိုင်တဲ့အတွက် ကလေးက AppBlock ထဲမှ ပိတ်ထားတာကို ပြင်ဆင်လို့ မရပါဘူး။ မိသားစုများကလည်း အလုပ်အားရက်များမှာ မိသားစုကို အချိန်ပေးနိုင်အောင် အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Apps များကို ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်တဲ့ ရက်များမှာ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ မဆိုင်တဲ့ ဖျော်ဖြေရေး Apps များကို ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ AppBlock မှာ အချိန် သတ်မှတ်ပြီး ခဏတာ ပိတ်ထားနိုင်သလို တစ်နေ့လုံး ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Snapdragon 855 ပါတဲ့ Nubia Red Magic3လာမည်
မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို တိုက်ခိုက်ရမယ့် Vampire’s Fall: Origins
Xiaomi Mi 10T နဲ့ Mi 10T Pro တို့ရဲ့ Specs အပြည့်အစုံ ပေါက်ကြားထွက်ပေါ်လာ
OPPO A33 (2020) ကို ထိုင်းမှာ မှတ်ပုံတင်လိုက်ပြီ
Redmi 9A ရဲ့ 6GB RAM Version ကို တရုတ်မှာ ရောင်းချ